nakho Hashflare - Blockchain Izindaba
Hashflare Google Imayini ukubuyekeza
Thina yahlola umhlinzeki Hashflare ngawe. Sihlanganyela lokhu kubuyekezwa okuhlangenwe nakho kwethu Hashflare. Thina ukutshala imali yethu siqu abahlinzeki abafanele futhi ukhombise imiphumela engafihli. Umhlinzeki Hashflare siye okwamanje kwaziwa ngokuthi omunye okungcono izimayini abahlinzeki ngokuya sithola okufanele ngemali esiyikhokhayo.
Okwamanje sinezindawo 1000.39 TH / s-SHA-256 Bitcoin Mining
Ngenxa imiphumela emihle kakhulu ngesikhathi umphakeli Hashflare, siye sagqoka eningi ukuthenga eyengeziwe. Sekukonke, siye bedele mayelana $ 150,000 kwezezimayini ngesikhathi Hashflare. Esikhathini Izincazelo ezilandelayo ungabona inkonzo yethu njengamanje ibibhukelwe:
Esikhathini ingcaca elandelayo sibonisa imiphumela izimayini wamanje ngalinye TH / s:
Njengoba ubona, thina njengamanje uthola isilinganiso. 0.00014428 BTC (Bitcoin) ngayinye ibibhukelwe TH / s ngaphambi kukhishwa izindleko yesondlo. Yilokho mayelana 0.14 BTC (bitcoin) ngosuku nje ngaphansi 1000 TH / s. Lapha ungabona yi ngaphansi nokugcinwa izindleko:
Nalapha futhi ngamanani, kusukela 0,14011852 Bitcoin kuthiwa emalini kithi ngenxa yokulungiswa 0,02317,904. Umphumela ngaleyo ndlela: 0.11693948 BTC ngelanga. Ngemva kwakho konke, 1288.87 USD usuku nge nokukala imali kwamanje – 11021.70 USD (26.01.2018)
nakho Hashflare ngokusekelwa
Siye saba nokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu hashflare ngokusekelwa kuze kube manje. izikhathi Ukusabela izinsuku ezimbili kumele ihlelelwe nguwe. Ngokuyinhloko, Nokho, sibona nokuvuleka kwe-ngokomthetho iziteshi ezahlukene ukwesekwa kanye kahle ikhasi Facebook njengoba a plus elikhulu.
Ikakhulukazi mkhulu nokuvuleka ngokuqondene nabantu ngemuva inkampani. Lutho neze umhlinzeki ifu amadili obala nalo. Ngaso sonke isikhathi kuhle ukwazi ukuthi ubani okhuluma naye ngesikhathi komunye umkhawulo.
nakho Hashflare ne backoffice noma kuwebhusayithi
Iwebhusayithi iyashesha futhi ehhovisi emuva kuyinto professional kakhulu. Kuze kube manje, akukho umhlinzeki ifu lapho ungenza izilungiselelo eziningi kangaka. Uma umsebenzi yesondlo eyenziwa iwebhusayithi, umhlinzeki kutawuniketa lwati website kanye Facebook, okuyisibonelo.
Experience imiphumela kwemayini
Kunjalo, Hashflare Kunconywa njengoba winner samanje Google yethu Izimayini. Siyakholwa ukthi kakhulu ngemiphumela. Kulesi Ukubuyekeza nasesikhathini ukuqhathanisa ungabona imiphumela yethu. Uma abaye baba nokuhlangenwe nakho okuhle noma okubi kulo mhlinzeki, ukhululeke uxhumane nathi.
Okokuqala-isandla isipiliyoni imibiko
Ngo imibiko yokuhlola, sithembela kuphela siqu okuhlangenwe nakho kwethu hashflare. Uzothola irisidi ngayinye izitatimende zethu ngesimo-skrini kwi website yethu. Siye imali yangempela akhawunti abafanele nokubika imiphumela yangempela kuphela. A esobala inqubo yokuhlola kubaluleke kakhulu kithi. eyodwa kuphela umphakeli ukuthi sesihlole futhi lwahlolwa thina uvezwa sibukeze yithi.
Experience nge wenkokhelo ku hashflare
Kunjalo, ekupheleni, udaba ka izinkokhelo kuyinto ebaluleke kakhulu. kuphela umhlinzeki kwemiphumela real kusukela izinombolo ehhovisi emuva yakha umondli omuhle futhi elihle. Singakuqinisekisa ukuthi leli qiniso nge Hashflare ngesisekelo ulwazi lwethu. Ngaphakathi 5 imizuzu Bitcoin bethu bonke babengaphansi ku isikhwama yethu. Futhi kule ndaba, singakwazi ukuncoma efwini izimayini umhlinzeki kuphela.
Hashflare yethu ukubuyekeza
Kunjalo, ngaphezu ulwazi lwethu, siphinde olwenziwa ukubuyekeza okuningiliziwe by injini. Kunjalo, simfuna Internet umkhonyovu, ukukhwabanisa, noma emagama lafana nalawa sidabukile-off. Ikakhulukazi kubantu abakhuluma isiNgisi-, lapho izimayini ifu isivele kangcono ezaziwayo, kukhona sipiliyoni.
Waba yini umphumela wesibindi yethu Ukubuyekeza hashflare
In the search German ngamazwe kanye ku-YouTube, thina asitholanga ezimbi ezabehlela nge Hashflare. Kuzo zonke izingxenyekazi, umhlinzeki udunyiswa njengoMdali sina futhi inzuzo. Kubonakala sengathi Hashflare akenzanga namaphutha amakhulu kakhulu namakhasimende yayo. Kunjalo, asizange kuphela wancika lezi kobufakazi kodwa futhi ngempumelelo kwenziwa uhlolo kwezethu imali.
Umbhali: Alexander Weipprecht
Ngenxa abaqeqeshiwe IT Uchwepheshe kwentuthuko yohlelo lokusebenza, ubelokhu wazisa ehola izinkampani software isikhathi esingaphezu 10 iminyaka. Cryptocurrency buya ngokuya ezibalulekile amabhizinisi kanye zimali. Alexander akafikelanga amaJuda kuphela ukunikeza wonke abantu nokufinyelela okulula ababaluleke.